နွေရာသီပရိုမိုးရှင်းများ - ဘာသာစကားနှစ်မျိုးသုံးတတ်သည့်ပညာရေးဌာန
ပူပြင်းတဲ့နွေရာသီ ... ပူပြင်းတဲ့အထူးအစီအစဉ်များ !!!
နွေရာသီအထူးပရိုမိုးရှင်းများကို BEI တွင်တိုးချဲ့လိုက်သည်။ သင့်ရဲ့အခွင့်အရေးကိုလက်လွတ်မခံပါနဲ့ စတင် မင်းရဲ့လေ့လာရေးခရီး ယခု!
Excellence ၏ 39 နှစ် !!!
* အထူးကမ်းလှမ်းချက်များ - ကွဲပြားသောစည်းကမ်းချက်များနှင့်အခြေအနေများရှိနိုင်သည်
6060 Richmond ရိပ်သာလမ်း,
ဟူစတန်, တက္ကဆပ် 77057
ဘာလို့ BEI လား
အသိအမှတ်ပြု & အသင်းဝင်
ကျောင်းသား Form များ
©မူပိုင် 2021 ဘာသာစကားနှစ်မျိုးသုံးသင်ကြားရေးဌာန